ဒီ 2018 ခုနှစ်မှာပေါ်လာမယ့် eReaders တွေကဘာတွေလဲ။ | eReaders အားလုံး
ဒီ 2018 ခုနှစ်မှာပေါ်လာမယ့် eReaders တွေကဘာတွေလဲ။
Joaquín Garcia က | | ကုမ္ပဏီများမှ, စာဖတ်သူများ
၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ပဉ္စမလမှာစပြီးရက်အနည်းငယ်လောက်အကြာမှာ eReader လွှတ်တင်မှုအသစ်ဟာလူကြိုက်များမှုသိပ်မရှိလှပါဘူး။ ကဏ္ the ၏အဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်မပေးရသေးပါ။ ယခုအထိ ၀ ယ်ယူလို့မရသေးသည့်ထုတ်ကုန်အသစ် ၂ ခုသာတင်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးများသည် eReader ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့သည်ယခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးထူးခြား။ ထူးခြားသောနည်းဖြင့်ထုတ်လွှတ်မည့်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။
ယခုအချိန်အထိတင်ပြခဲ့ကြသည်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည် SonyDPT-CP1 နှင့် eOnebook ။ ဤရွေ့ကားကိရိယာများကိုကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင် eReaders ဖြစ်ကြသည်။ ထိုပုံရသည် မျက်နှာပြင်ကြီးသည်လာမည့် eReaders ၏ထွက်ရှိမှုများကိုအမှတ်အသားပြုသည့်အင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်။ လာမည့် ၂၀၁၈ တွင်ဖွင့်လှစ်မည့်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရောင်းချမည့်မျှော်လင့်သော eReaders လွှတ်တင်ခြင်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
ပထမတစ်ခုကိုခေါ်သည် InkBook Infinity ကို။ ဤကိရိယာသည် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ထက်ကျော်လွန်သောနည်းပညာများနှင့်နည်းပညာအသစ်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရာတွင်ဤနှစ်များအတွင်းလူကြိုက်များသော InkBook ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် InkBook Infinity အကြောင်းပြောကြသည်။ Carta နည်းပညာဖြင့် ၁၀.၃ လက်မမျက်နှာပြင်ပါသော eReader ။
eReader တွင်ရှေ့မီးနှင့် touch screen ရှိလိမ့်မည်။ ဒါဟာဒီပစ္စည်းကပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် 1 Gb ram memory, 3.000 mAh ဘက်ထရီနှင့် USB-C port တို့ဖြင့်ဖြန့်ချိမည် ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်လက်တော့ကဲ့သို့သောအခြားကိရိယာများနှင့်ဤကိရိယာကိုချိတ်ဆက်ရန်။ ဒီ eReader ၏ပရိုဆက်ဆာသည် 6GHz i.MX1SL ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အတည်မပြုရသေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်မည့်နေ့ရက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသေးသောအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် InkBook ၏လမ်းကြောင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၎င်းကိရိယာသည်ယူရို ၃၀၀ ထက်မပိုစေရ။
1 OnyxBoox နိုဗာ
2 Tolino စာမျက်နှာ 2
3 Kobo Clara HD ကို
4 အသစ် Kindle အသစ်?
5 ပြီးတော့ဒီ eReader တွေအားလုံးကိုဘယ်တော့ဝယ်နိုင်မှာလဲ။
Onyx Boox သည်မော်ဒယ်လ်ပစ်လွှတ်မှုများအတွက်တက်ကြွသောကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကဖန်သားပြင်ကြီးတစ်ခုနှင့်အတူ eReader တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်မော်ဒယ်သစ်များကိုဖြန့်ချိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အထူးသဖြင့်၊ မော်ဒယ်လေးခုကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ Onyx Boox Nova၊ Onyx Boox Note S၊ Onyx Boox e-Music ရမှတ်နှင့် Onyx Boox Poke။ နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာ ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိပြီးကျန်ကျန်တဲ့များတွင်ကြီးမားသောဖန်သားပြင်များရှိသည်။
ငါ့အတွက်မှတ်သားစရာအကောင်းဆုံးက Onyx Boox Nova၊ ၇.၈ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိပြီး 7,8 Gb ram memory နှင့် Android 1 ကိုအသုံးပြုထားသော operating system တစ်ခုပါရှိသည်။။ eReader တွင် Carta နည်းပညာ၊ Wi-Fi နှင့် Bluetooth တို့ပါ ၀ င်သောအီလက်ထရောနစ်မှင်ဖန်သားပြင်တစ်ခုပါရှိသည်။ Note S နှင့် e-Music ရမှတ်သည် ၁၀” အထိရှိမည်၊ တစ်ခုမှာမှတ်စုတင်ခြင်း (Note S) နှင့်တစ်ခြားဂီတလောကတွင် (e-Music Score) ကိုရနိုင်သည်။ ဒီမော်ဒယ်အားလုံးမှာ Android 10 ပါလိမ့်မယ်။ စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းတွေဖြစ်တဲ့ Evernote, Google Calendar သို့မဟုတ် Google Docs စတဲ့ဖုန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။
ဤရွေ့ကား devices များအဖြစ်ဂရုတစိုက်နောက်တော်သို့လိုက်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် ဤ eReader မော်ဒယ်များသည်အဖြူရောင်တံဆိပ်ကပ်ထားသော eReaders များဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အခြားစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်စာအုပ်ဆိုင်များ၏အခြား eReaders များကိုဖန်တီးရန်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီး ၄ င်းတို့ကိုအမည်ပြောင်းစေသော်လည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ InkBook သို့မဟုတ် Tolino ကဲ့သို့သောအခြား eReaders များထက်အချို့သုံးစွဲသူများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
Tolino စာမျက်နှာ 2
Tolino သို့မဟုတ် Tolino မဟာမိတ်အဖွဲ့သည်အမေဇုံကြီးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တင်ဆက်ထားသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကဒီပစ်လွှတ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူသည့်အခါအောက်တိုဘာလလအကြောင်းကို, Frankfurt တရားမျှတသောအဘို့အများသောအားဖြင့်ထိုသို့ပြု၏။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူတို့လောင်း Epos Tolino၇.၈ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် etereader နှင့် Letter and HZO နည်းပညာတို့ပါဝင်သည်။
ဤဖတ်ရှုသူသည်ဗဟိုဥရောပတွင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ်တွင်၎င်းကိုအသစ်ပြုပြင်မည်မဟုတ်ဟုထင်ရသည် အကယ်၍ သင်၏ low-end eReader က Tolino Page ကိုလုပ်လိမ့်မည်။ ဒီကိရိယာ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ဘက်ထရီကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် 800 x 600 pixel မှရရှိသော resolution ကိုတိုးတက်စေသည် 1024 x ကို 728 pixels ကိုမှာ။ eReader ၏ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဆုံးဖြတ်ချက်။
၎င်းသည်ယခုအချိန်ထိလူသိအများဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး FCC မှ၎င်းတည်ရှိမှုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားသည်။ ဤကိရိယာ၏အမည်သည် Kobo သို့မဟုတ် Rakuten Kobo အမှတ်တံဆိပ် eReader နှင့်တူညီသည်။ The FCC အစီရင်ခံစာ ၎င်းသည်စက်တင်ဘာလအထိအကန့်အသတ်ရှိသဖြင့်ထိုလသည်လွှတ်တင်မည့်ရက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘယ်အကွာအဝေးကပိုင်ပါဘူးအကြောင်း the Kobo Clara HD ကို၎င်းကိုမသိရှိရသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သောမှတ်တမ်းများကိုကြည့်ပါ 1.500 mAh ဘက်ထရီရှိသည်, ကိုက်ညီနိုင်သည့်သေးငယ်တဲ့ဘက်ထရီ အနိမ့် - နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေး eReader ရန်ဆိုလိုသည်မှာ Kobo Aura Edition 2. အတွက်အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စက်တင်ဘာလတိုင်အောင်ဤစက်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အရာကိုမျှမသိပါ။
အသစ် Kindle အသစ်?
အမေဇုံသည်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုအချိန်အကြာကြီးထုတ်ပေးခြင်းမရှိသေးပါ၊ အနည်းဆုံး၎င်း၏အထင်ကရထုတ်ကုန်များ အခြေခံ Kindle နှင့် Kindle Paperwhite ။ ဒီ Amazon eReader မော်ဒယ်နှစ်မျိုးဟာကျွမ်းကျင်သူများစွာရဲ့အမြင်မှာပါ အမေဇုံမကြာမီသက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်ဟုထင်သော လက်ရှိရောင်းချနေသည့် Kindle ၏ ၀ င်ရောက်မှုအဆင့်နိမ့်သော Pearl နည်းပညာမျက်နှာပြင်သည် Carta HD display အတွက်အနားယူနိုင်သည့်ခေတ်နောက်ကျနေပြီး၎င်းသည် device ၏စျေးနှုန်းကိုမမြှင့်ဘဲရှိနေသည်။
Kindle Paperwhite ကမျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊ အမေဇုံရဲ့ Audible အော်ဒီယိုစာအုပ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့သဟဇာတဖြစ်ဖို့အသံထုတ်ပေးတယ်။ ဒါပါ ဘီဇို့စ်ကုမ္ပဏီသည် Audible နှင့် Alexa ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကြီးအကျယ်လောင်းနေသည်အထောက်အပံ့မရသေးသည့်သင်၏ eReaders မှလွဲ၍ အခြားကိရိယာအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သောဝန်ဆောင်မှုများ။ high-end ထုတ်ကုန်များသည်အသစ်တစ်ခုကိုရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် Kindle Oasis2ကိုမကြာသေးမီကသက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီးမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကမဆိုဤမော်ဒယ်တွင်ဆုံးရှုံးမှုကိုဆိုလိုသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ငါ (စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများစွာကဲ့သို့) Amazon သည်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် အကယ်၍ သင်သည်ဤ ၂၀၁၈ အတွက်သင်၏ eReaders အမျိုးအစားများကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်ပြုပြင်မည်ဆိုပါက သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်အသစ်ဖြစ်သော (Alexa ပါဝင်သည်) အားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်နိုင်ရန်။
ပြီးတော့ဒီ eReader တွေအားလုံးကိုဘယ်တော့ဝယ်နိုင်မှာလဲ။
ဤသူသည်သင်တို့အများသောမေးသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ်အတွင်း eReader လွှတ်တင်ခြင်း၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည့်howပြီလနှင့်စက်တင်ဘာလတွင်နှစ်လမည်မျှရှိသည်ကိုငါတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ devicesပြီလမှာဒီစက်ပစ္စည်းတွေမဖြန့်ချိခဲ့လို့ပါ စက်ပစ္စည်းအသစ်တွေမြင်ရမယ့်စက်တင်ဘာလဖြစ်လိမ့်မယ်။ အမေဇုံမော်ဒယ်များကိုဒီဇင်ဘာလတွင်အနက်ရောင်သောကြာနေ့နောက်ပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိနိုင်သည်။ ဘယ်ကိစ္စမဆို, စျေးကွက်ထဲတွင်ပစ္စည်းအသစ်တစ်လုံးဝယ်ယူရန်နှင့်မော်ဒယ်သစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်မှုများကိုမဆုံးရှုံးရန်ပစ္စည်းကောင်းများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အမှု၌သင် eReader သက်တမ်းတိုးသို့မဟုတ်ဝယ်ချင်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » ဒီ 2018 ခုနှစ်မှာပေါ်လာမယ့် eReaders တွေကဘာတွေလဲ။
ဒီနှစ်မှာတော့ PocketBook InkPad3ပေါ်လာတယ်။ ငါဝယ်လိုက်တာကစျေးသိပ်မကြီးဘူး၊ ဝယ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူး၊ ငါအရမ်းကြိုက်တဲ့ကိရိယာပဲ။
အမေဇုံကမျက်နှာပြင်ကြီးမော်ဒယ် (၉″ ထက်ပိုသော) ကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်မလား။ Kindle DX ကတည်းကသူမရဲရဲခဲ့ဘူး၊ ငါအရမ်းသိချင်ခဲ့တယ်။ ငါအမြဲတမ်းပြောခဲ့ဖူးသည်မှာကြီးမားသော screen ereaders များသည်သူတို့၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အရောင်ရှိသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်အမြဲပြောခဲ့သည်၊
ငါ Onyx စာအုပ်မော်ဒယ်များအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ရှာပါ။
Portable Caliber: Mac နဲ့သဟဇာတလား။ ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
အကောင်းဆုံး Kindle အဖုံးများ